जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा - Nepal Post Daily
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा
सिमरा – बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नौ वटा वडा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भैसकेका छन् । सोमबार उपमहानगरको वडा नम्बर ५ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै पुर्ण शौचालयसहीतका वडाको संख्या ९ पुगेको हो ।
आज बकुलियामा आयोजीत एक कार्यक्रमका बिच जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेलले सो वडालाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरेका हुन् । यसअघी मेयर डा. पौडेलले एक बालकलाई हात धुन सिकाउँदै कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रमका बिच मेयर डा. पौडेलले वडा अध्यक्ष मोहित चौधरीलाई खुल्ला दिशामुक्त वडाको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै डा. पौडेलले आँफ्नो घर छिमेक र सहर सफा राख्ने दायित्व हरेक नागरिकको भएको बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेका डा. पौडेलले सरसफाई आफ्नै जिवनका लागी महत्वपूर्ण र अपरिहार्य बिषय भएको भन्दै यसमा हेलचक्र्याईँ नगर्न वडाबासीलाई आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा नगर उप प्रमुख सरस्वती देवी चौधरीले खुला दिशामुक्त वडाका लागी सरसफाई सम्बन्धी आचारसंहिता पढेर सुनाएकी थिईन् । त्यसैगरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिवराज सेढाईँले खुला स्थानमा सौच नगर्न वडाबासीलाई प्रतिबद्ध बनाएका थिए ।
यु.एन ह्याबिटेट, आई.डि.एस. नेपाल र चेक नेपालको सहयोगमा वडालाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै .एन. हेबिटेटकि बारा जिल्ला संयोजक उमा सिंखडाले खुल्ला दिशामुक्त घोषणा हुँदैमा मात्रै सरसफाई नहुने बताईन् । घोषणा कागजमा मात्रै सिमित नराखेर ब्यवाहारमा लागु गर्नसकेमात्रै यसले सार्थकता पाउने उनको भनाई थियो । कार्यक्रमका बिच जनचेतनामुलक नाटक समेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।
Previous articleदोस्रो सातामा ‘एभेन्जर्स इन्ड गेम’ले कमायो २ अर्ब डलर
Next articleचुरोट छोड्ने उपाय